ကံကုန်းရေတောင်းဆိုခြင်း အစည်းအဝေး | Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL
ဖေဖော်ဝါရီလ 07 2018
ကံကုန်းကျေးရွာသည် အနီးနားရှိရေအရင်းမြစ်မှ သောက်ရေသန့်ထောက်ပံ့ရန် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက မြန်မာယန်စီကုမ္ပဏီသို့တောင်း ဆိုမှုများရှိဖူးပါသည်။ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဆွေးနွေးရန် CSD နှင့် ကံကုန်းကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
ယခင်အစီစဉ်တွင် မြောက်ယမားချောင်းမှ မိုးကြိုး ဆာလဖျူရစ် အက်စစ်စက်ရုံ ရှိသွယ်တန်းထားသော လိုင်းမှ ကံကုန်ကျေးရွာသို့ သန့်ရှင်းသောရေများ ပေးဝေရန် ကမ်းလှမ်းမှုများရှိခဲ့သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်မှ ယင်းကျေးရွာသို့ CSR အစီစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လှူဒါန်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊သားများက ဤလှူဒါန်းမှု ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး အနည်းငယ်ကွာဝေးသော ချင်းတွင်မြစ်မှ ရေကို ပေးဝေရန် မြန်မာယန်စီကုမ္ပဏီကို ပြောဆိုခဲ့ပါ သည်။
စီမံကိန်း၏ လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ မြန်မာယန်စီမှ အသုံးပြုနေသော ရေအရင်းမြစ်မှ တိုက်ရိုက်သွယ်တန်းရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ နှင့် တစ်အိမ်မှ တစ်အိမ် သို့ရေပိုက်သွယ်တန်းမှုပေးရန် အခြားအရေးကြီး ကိစ္စများ စသည့် ဆွေးနွေးခြင်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာယန်စီ operation management မှ အစည်းဝေးကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ရရှိနိုင်သော အရာများမှ ဖြစ်နိုင်သော အရာများဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွားကိုယ်စားလှယ်များကို သတင်းပေးခဲ့သည်။
၁ မြန်မာယန်စီ နှင့် လက်ပတောင်းစီမံကိန်း ကိုဖြန့်ဝေပေးနေသည့် အဆိုပါတည်ရှိနေသော ရေသွယ်တန်းမှု စနစ်မှ ရေ တိုက်ရိုက် ထောက်ပံမှုရ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ယင်းနေရာတွင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၄၀၀၀ နှင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ ကျော်အတွက် ကြာရှည်စွာ ထောက်ပံပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂ အခြားစနစ်တစ်ခုကို အကောင်ထည်ဖော်ရန် နှင့် ဤအရာသည်သာလျှင် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကံကုန်းကျေးရွာသို့ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ (၄၀၀၀၀) ထောက်ပံသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ကို စဉ်းစားကြည့်မည် ဆိုပါက နှစ်စဉ် CSD/CSR ဘက်ဂျက်ထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မည်။
၃ Operation မန်နေဂျာ မစ်စတာ Wallis မှ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး နောင်လာမည့် ဘက်ဂျက်များ ကိုပေါင်းခြင်းဖြင့် တောင်းဆိုသည့် စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစီစဉ်တွင် အခြားလိုအပ်သည့် စဉ်းစားစရာများလည်းရှိကြောင်း မြန်မာယန်စီ OM Wallis မှ ကျေးရွာကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်များကို သတင်းပေးခဲ့ သည်။
၁ ၎င်း system အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ထိန်းသိမ်းမည် ကိစ္စများရှိပါသည် ထို့အပြင် အင်ဂျင်နီယာများ ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သင်ကြားမည့် ဝန်ထမ်းများ နှင့် အကြံပေးအရာရှိများလည်း လိုအပ်ပါသည်။
၂ စီမံကိန်းတွင် ပန့်အတွက် လျှပ်စစ် နှင့် အပိုပစ္စည်း ထောက်ပံခြင်း လည်း ပါဝင်ပါသည်။
၃ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်၊ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် တာဝန်များ ခွဲဝေသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။business plan အတည်ပြုရန်လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
၄ ဤကဲ့သို့ စီမံကိန်းများအတွက် ဆက်လက်ထိန်သိမ်းရန် ၊ လျှပ်စစ်အားတန်ဖိုးများ ၊ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများ ကို မည်သူပေးဆောင်လိမ့်မည်လဲ?
ကံကုန်းကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အရာအားလုံး စီမံခန့်ခွဲမည်ဟု မြန်မာယန်စီကုမ္ပဏီကို သတင်းပေးခဲ့သည်။ စီမံခန့်ခွဲသူတို့ သည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရေထောက်ပံမှုအတွက် အိမ်ပိုင်ရှင်များထံ ငွေကောက်ခံရန် အစီစဉ်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအရုလုပ်ငန်းအတွက် အချက်အလက်များဖြစ်သည့် မှတ်ပုံတင် နှင့် လိုင်စင်လိုအပ်လိမ်မည်၊ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု Mr Wallis မှ သတင်းပေးခဲ့ပါသည်။ကံကုန်းကျေးရွာ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေရန် မြန်မာယန်စီမှ ဖြစ်နိုင်သမျှသောနည်းလမ်း များဖြင့် ကူညီထောက်ပံပေးလိမ့် မည်ဟု OM Mr Wallis မှ နိဂုံးချုပ်ပြောကြားပြီး အစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ခွင့်ပြုချက်သည် ပထမ ဖြစ်သည်။ကံကုန်းကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို အာဏာပိုင်များနှင့် သဘောတူညီပြီး လိုအပ်သည်တို့ကို လိုက်ပါပြသခဲ့သည်။
Mr Wallis သည်မေးခွန်းတစ်ခုနှင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်၊ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း မေးခွန်းကို ဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ "မြန်မာဦးပိုင် မှ လှူဒါန်းခြင်း နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ကိုမည်သည့် အတွက်ကြောင့် လက်မခံပါသလဲ?" လက်ရှိအသုံးပြုနေသော နေရာမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ယင်း လှူဒါန်းမှု သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု လျော့နည်း လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။